Xidhmada Aaladda Hoose ee GNOME | Laga soo bilaabo Linux
Xidhmada Aaladda Hoose ee GNOME
sanhuesoft | | Muuqaal / Shakhsiyeyn
Goorma Ubuntu bilaabay isticmaalka Midnimada as desktop ahaan waxaan go'aansaday inaan rakibo GNOME PPA-gaaga. Markaa wixii ugu horreeyay ee aan sameeyay waxay ahayd inaan raadsado baakad sumadeed taas oo aad ugu habboon qaabkeyga. Waa daqiiqadaas aan la kulmay Astaamaha Hoose: baakad leh astaamo aad u qurux badan in la fiiriyo.
Markaas ayaan u haajiray Arch Linux oo mid ka mid ah waxyaabihii ugu horreeyay ee aan qabtay ayaa ahayd inaan soo dejiyo isla baakadkaas isla markaana ku rakib nidaamka. Tan awgeed, waa lagama maarmaan in laga soo dejiyo DeviantArt, nuqul ka gal galka aan dib ka tilmaami doono ugu dambayntiina adeegsiga gnome-tweak-tool, u deji sida halbeegga astaanta.
Soo dejiso xirmada Astaamaha Hoose ka DeviantArt adoo raacaya iskuxirka.
Ka fur furaha adoo adeegsanaya qalabka wax lagu duubo / decompression ee aad jeceshahay. Waxaan adeegsaday Maamulaha Faylka (feyl-duub).
Haddii aad ku sugan tahay Arch waad rakibi kartaa adoo adeegsanaya amarka soo socda.
sudo pacman -S file-rullaluistemadka
Gurigaaga dhexdiisa ku samee cinwaanka .icons. Waxaad ku sameyn kartaa adoo adeegsanaya amarka soo socda, haddii aad guriga ku jirto:
Nuqul galka mawduuca astaamaha ee aan la furin buuggan.
Si aad udhaqaajiso mawduuca waxaad u baahan tahay Qalabka 'GNOME Tweak Tool', oo sidoo kale loo yaqaan 'Tweak Tool', oo aad ku rakibi karto amarka soo socda (Arch Linux):
sudo pacman -S gnome-bedelo qaab-qalab
Kadib ku shaqee qalabka adoo ka dhex raadinaya liiska codsiyada GNOME ama adigoo ku ordaya qalabka:
Safka bidix xulo "Mawduuca" iyo gudaha, "Icon Theme" xulashada calaamadda "Elementary".
Tan waxaan horeyba u haynaa dulucda Dugsiga Hoose miiska noo saaray GNOME. Waa in la ogaadaa in habkani uu shaqeynayo si loo rakibo xirmo kasta oo muuqaal ah oo la mid ah, oo aad ka heli karto DeviantArt.
Waxaan rajeynayaa in tilmaantan yar ay waxtar kuu laheyd. Sida had iyo jeer, wixii su'aalo ah, faallooyin ah ama soo jeedin ah waxaan kugu sugayaa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Xidhmada Aaladda Hoose ee GNOME
Xirmada AUR ee aasaasiga aasaasiga ah adiga kuuma shaqeyso? XFCE, adoo ku rakibaya xirmadaas, waxaad ku dooran kartaa aasaasiga barnaamijka qaabeynta.
Taasi waa hab kale oo rakibid ah oo loogu talagalay xirmada aasaasiga ah ee loogu talagalay kuwa aan jeclayn inay isticmaalaan AUR. GNOME ahaan waxaad u isticmaali lahayd gnome-tweak-tool si kasta oo aad ugu doorato inuu yahay astaamaha astaanta. Salaan iyo mahadsanid faallooyinka.
Ahaa, waxaan ku dhahayey haddii ay dhacdo inaadan aqoon xirmada, maxaa yeelay waxaad sheegaysaa in si loo rakibo Gnome Ubuntu waxaad u tagtay PPA halkii aad ka soo dagsan lahayd ilaha iyo wixii la mid ah.
Sida barnaamijyada intiisa kale, qofkasta oo raba inuu isticmaalo mawduucan astaanta ah, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho xirmooyinka laga heli karo kaydinta (ama AUR kiiskan) halkii aad gacanta ku rakib lahayd waxyaabo. Uguyar maxaa yeelay xirmooyinkaas badanaa waa la ilaaliyaa oo haddii ay dhacdo casriyeyn cusub oo soo saareysa baakad ama yaourt ama maamule kale oo leh taageerada AUR waa la qabtay, haddii kale waxaa lagama maarmaan ah in gacanta lagu celiyo hawlgalka.
Markii aan haysto rukhsadaha tifaftiraha (haddii aan joogo marka "codsiyada" ay furan yihiin) waxaan ku dari doonaa beddelaadda AUR kuwa isticmaala yaourt. Salaan iyo mahadsanid faallooyinka.
Waa in la ogaadaa in xirmadaan aan la cusbooneysiin in inta badan si kastaba ha noqotee, sidaa darteed maahan soooo lagama maarmaan in la helo awood wax lagu cusboonaysiin karo, in kasta oo had iyo jeer ay wanaagsan tahay
Linuxeros oo leh digaag dameer ah 3,2,1 ...
isbedel ayaa imaan doona.
Haha, ninyahow, sidaas maahan, sax?
Shayga suuqa wax la hubo waa hubaal, ma garanayo illaa heerka Linux ee kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee kumbuyuutarrada si fiican u shaqeeya (dadka isticmaala caadiga ah, aniga ayey ii shaqaysaa); Weli waxaan u maleynayaa in shaqo dheeraad ah loo baahan yahay si loo siiyo waxyaabaha shaqeeya iyo muddada, iyada oo aan loo baahnayn in la xakameeyo shit maxaa yeelay qofna si fiican uma qaban shaqadooda (oo waxaan isticmaalaa Arch laakiin waxaan u hadlayaa Ubuntu, Fedora, iwm. Arch badan). Guud ahaan, QA waxaa ka maqan qallooca fikradayda (gaar ahaan sidoo kale, waa inaad barataa sida wax loo qabto si wanaagsan, ama si wanaagsan ayaa loo qabtay oo lama sameyn: D).
Waxyaabaha faa'iidada ... Waxaan ka shakisanahay halkaa, fiiri Linux iyo waxyaabaha la yiraahdo, inkasta oo ay xor yihiin, badankood waxay ka dambeeyaan shirkadaha ku nool taageerada ay siiyaan dhinacyada saddexaad; 20 sanona waa sanado badan huh! (Windows 8 ka sokow waxaan u maleynayaa inay soo jirtay sanad ama wax la mid ah).
Iyo waxa ku saabsan adeegsadayaasha qanacsan ... ui ui ui, waxaa jiri doona wax: D. Windows 8 waxaa helay dhaleeceyn fara badan oo ku saabsan isbadalka interface-ka iyo kuwa kale, dadka aan faraxsaneyn waxaa jira (waana jireen) baaldiga caarkiisa. Sidoo kale sida wanaagsan ee ay ahaayeen (Windows XP -> Windows 7 waxay dareentay _great_ horumar dhanka xasiloonida iyo amniga ah, dib uma xasuusto shaashadaha buluugga ah ama fayruusyada wax u dhimey nidaamka oo dhan) way aadaan oo waxay ku xirxiraan wadayaasha shitty qaarkood (* sanduuqa * Wireless by Intel * coff *) oo ka tagaya dadka isticmaala ee mudnaanta koowaad laga yaabo inay ku qancaan nidaamka qashinka maxaa yeelay kubbaddoodu way sarreeyaan.
Shit ... faallooyinka ayaa jawaab u ahaa Windowsero ...
Waxaan u maleynayaa in marar badan GNU / Linux lagu dhaleeceeyay qaybinta dhexdhexaadka ah sida Ubuntu. Sidoo kale waa iska cadahay in Windows uu yeelan doono suuq badan haddii uu kugu qasbo marka aad iibsaneyso buug ama kombiyuutar.
Haa, dabcan, waa in dhaqanku dhaqan yahay oo marka dadku u baxaan inay soo iibsadaan kombuyuutar cusub dukaamada waaweyn, waxa ay ka helaan waa PC-yada leh Windows-ka horay loo rakibay.
Shakhsiyan, dadka aan ogahay badankood ma yaqaanaan waxa Linux ku saabsan mana xiiseynayaan inay ogaadaan, qaar baa aaminsan inay si aad u adag u murugsan tahay, qaar kalena waxay yiraahdaan "way nuugtaa" maxaa yeelay ma ciyaari karaan ciyaaro ama ma lahan karaan iTunes, iwm Marka dhab ahaantii qaar badan oo ka mid ah wixii ay ku sameeyaan mashiinadooda, nidaam kasta oo marin u leh internetka oo aad ku daawan karto fiidiyowyada (qiyaas ahaan) ayaa ku filan.
Taasina iyada oo aan arrimaha caqiidada ah la horkeenin ... haddii aad bilowdo inaad ka hadasho xorriyadaha, kuwa kale ayaa durba kugu eegi doona weji qalaad: D. Maxay tahay xoriyaduhu haa, laakiin maadaama aad rabto inaad wax ku bedesho barnaamijka, iyadoon loo eegin intaad le'eg tahay koodhka ilaha, waad arki kartaa iyaga inay sameeyaan waxa aad rabto.
Oo waxaan ka baxeynaa mowduuca: D! Xirmada astaanta ayaa aad u wanaagsan, waxaa jiray waqtiyo aanan aad u jeclayn astaamaha fayllada iyo qaar kale waxaan u malaynayaa inaan xusuusto, laakiin hadda kani waa mawduuca aan isticmaalo.
Faience-ka ma xuma sidoo kale laakiin ... waxaa jira wax aan aniga i qancin karin, laga yaabee xaqiiqda ah inaysan jirin ikhtiyaarro asaasi ah oo lagu doorto astaamaha xaaladda mugdiga ama iftiinka, haddii naadigu uusan ka fikirin adeegsiga haha.
Markii aan galay Jaamacadda waxaan bilaabay inaan isticmaalo GNU / Linux markale, maxaa yeelay kahor waxaan isticmaali jiray kaliya Windows 7 uguyaraan hal sano asxaabteyda waxay iila ekaayeen sidii weirdo, maxaa yeelay waxay fahmi waayeen inuu kumbuyuutar shaqeyn karo Windows la'aan. . Marka waxaan weydiiyay mid ka mid ah asxaabteyda ugu dhow waxa uu kumbiyuutarka u adeegsaday, wuxuuna ii tilmaamay sida wanaagsan ee aad u tiraahdo si aad ugu baahato internetka, qaar ka mid ah xafiiska aasaasiga ah ee otomaatiga iyo multimedia aasaasiga ah (dhageysiga muusikada, daawashada fiidiyowyada, iwm). Maalmahaa aad buu ugu badnaa Windows-ka maxaa yeelay aad buu gaabis u ahaa oo xanaaq badan ayaa la socday.
Waxaan u soo bandhigay inuu isku dayo Ubuntu, taasoo ahayd mid aad u dareen badan oo si wanaagsan u qaybsan si looga bilaabo adduunka GNU / Linux, iyo haddii uu wax su'aalo ah qabo inuu aniga haysto si aan u xalliyo dhibaatooyinkiisa. Sheeko gaaban, maanta kuma farxin kartid buuggaaga xusuus-qorka, wuxuu u shaqeeyaa si cajaa'ib leh (in kasta oo ay leedahay ATI) waxayna ku sameyn kartaa wax kasta oo ay ku sameyn jirtay Windows-ka laakiin dhibaato la'aan badan. Tani waa sida aan u tusay in GNU / LInux uusan waxba ka ahayn meeraha kale oo qof kasta oo damac leh uu isticmaali karo.
Dad aad u tiro yar ayaa fahamsan xorriyadaha, waxaan u maleynayaa inay aad u wanaagsan tahay maxaa yeelay inkasta oo qofku badiyaa aanu khibrad u lahayn luqadaha oo dhan, haddana waxaa jira beel ballaadhan oo dib u eegaysa xeerarka ilaha si barnaamijyadu ugu xadgudbin xorriyadan
Runtii waan jeclahay mawduuca, waqti fiican ayaan ku qaatay isticmaalka Faenza ka dibna Faience, laakiin waxaan ku dhammeeyey inaan ku caajiso qaabkaas kalida ah oo wata astaamo laba jibbaaran oo nadiif ah. Dugsiga hoose waa waxa aan weydiisan karo oo dhan, ugu yaraan GNOME-Shell waa wax weyn.
Salaan ka timid Chile gacaliyahayga!
Sida loogu daro midab Maareeyaha Xirmada Pacman
Adeegso dhowr Conky's isla waqtigaas